अञ्जु तामाङ | Ratopati
बुधबार १९ मङ्सिर, २०७५ Sunday, 31 May, 2020
‘खेलाँची नठानौँ दम रोगलाई’ access_timeपुस ७, २०७६
मधुमेह, ब्लड प्रेसर जस्तै दीर्घ रोग हो दम । नेपालको कुल जनसंख्याकोे ११ प्रतिशत अर्थात् झण्डै ३० लाख नेपालीमा दम रोग देखिएको छ । दम वृद्धवृद्धामा मात्रै देखिन्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ तर यो रोग सबै उमेर समूहको व्यक्तिमा हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । समयमै दम रोगको पहिचान गरी...
सावधान ! कोठामा कोइला र हिटरको प्रयोग त गर्दै हुनुहुन्न ? access_timeपुस ३, २०७६
देशभर अहिले चिसो बढेको छ । सकेसम्म घरभित्र चिसो नछिरोस् भनेर झ्याल÷ढोका सबै बन्द गरेर राखिन्छ । साथै, कोठा र शरीरलाई न्यानो बनाउनको लागि हिटर, कोइला आदिको प्रयोग पनि बढ्दो छ । तर, यस्ता कुराहरु प्रयोग गर्दा ध्यान पु¥याउन सकिएन भने ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ भन्...
बालबालिकाको मलद्वारमा प्वाल नहुने अनौठो समस्या : के भन्छन् चिकित्सक ? (भिडियोसहित) access_timeमंसिर २८, २०७६
काठमाडौँ । कतिपय अवस्थामा नवजात शिशुमा दिसा निस्कने प्वाल नहुन पनि सक्छ । यो समस्या विश्वका सबै देशका बालबालिकामा देखिने समस्या हो । जन्मजात मलद्धवारको प्वाल नहुने समस्या नेपालको बालबालिकामा पनि देखिन्छ । शिशु जन्मेको २४ घण्टासम्ममा दिसा गरेन भने यसबारे चनाखो हुनु...
विपन्न नागरिक उपचार कोषबाट ५३ हजार नागरिकले लिए निःशुल्क सेवा access_timeमंसिर २६, २०७६
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विपन्न नागरिक कोषबाट ५३ हजार ३ सय ३० जना नागरिकले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् । आ.व. ०७१–०७२ बाट सुरु गरिएको विपन्न नागरिक कोषबाट ८ जटिल रोगका बिरामीलाई नेपाल सरकारले उपचारमा सहुलियतको ...
नवजात शिशुमा यी समस्या जन्मजात आउन सक्छन् access_timeमंसिर १८, २०७६
आधिकारिक तथ्याङ्क नभए पनि नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत हिस्सा १८ वर्षसम्मका बालबालिकाले ओगटेका छन् । तर ती बालबालिकाको स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने अझैसम्म सरकार तथा निजी क्षेत्र गम्भीर भएको पाइँदैन । अहिलेसम्म कान्ति बाल अस्पतालले मात्र बालबालिकाको स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्...
एचआईभी सङ्क्रमितको नाममा वर्षमा दुई अर्ब खर्च, अझै ६ हजार सङ्क्रमित स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्क बाहिर access_timeमंसिर १५, २०७६
आज विश्व एड्स दिवस । नेपालमा ३१ वर्ष पहिला सन् १९८८ मा पहिलो पटक एचआईभी पत्ता लागेको थियो । तर सङ्क्रमितको सवालमा भने अनुसारको कार्यक्रम हुन सकेको छैन । यकिन तथ्याङ्क नभए पनि झण्डै ६ हजारको हाराहारीमा सङ्क्रमितहरु स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको सरकार...
यसकारणले हुन्छ शिशुको पेटभित्र शिशु ! access_timeमंसिर १४, २०७६
काठमाडौँ । महिला र पुरुषको संसर्गपछि महिलाको पाठेघरभित्र बन्ने जीवनको शुरुवाती चरणको रुप हो भ्रुण। यस अर्थमा कुनै पनि महिलाभित्र भु्रण हुनको लागि महिला र पुरुषबीच संसर्ग हुनु वा चिकित्सीय हस्तक्षेप (कृत्रिम गर्भाधान) ले सो क्रिया सम्पन्न गरेको हुनैपर्छ । तर सधैं यस्त...
बालबालिकालाई चिसोबाट जोगाउन यी कुरामा ध्यान दिनुस् access_timeमंसिर ७, २०७६
काठमाडौँ । मङ्सिर सुरु भएसँगै चिसो मौसम सुरु भएको छ । यो समयमा रुघाखोकी, ज्वरो, निमोनिया लगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखा पर्दछन् । समस्या सबै उमेर समूहका व्यक्तिमा देखिए पनि बालबालिका बढी जोखिममा पर्छन् । बालबालिकाले आफ्नो स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या खुलस्त भन्न नसक्...
सँगै बास बसेकी युवतीको मृत्यु भएपछि मोडिएको यात्रा access_timeमंसिर ३, २०७६
काठमाडौँ । सामान्य परिवारमा जन्म, पढाइमा अब्बल, अमेरिका जाने सपना त्यागेर नेपालमै चिकित्सक कर्म, राजधानीका सुविधासम्पन्न अस्पतालका तुलनामा विभिन्न जिल्लामा गएर बिरामीहरुको सेवा गर्ने चाहना । झट्ट सुन्दा कसैको जीवनमा यस्ता खुड्किलाहरु पार भए भनेर कमैले पत्याउँछन् । कि...
मिर्गाैला प्रत्यारोपणपछिको अनुभव : मिर्गाैला बिग्रिँदैमा जिन्दगी समाप्त हुँदैन access_timeकात्तिक २७, २०७६
काठमाडौँ । ३९ वर्षको उमेरमा बिहान १० देखि ५ बजेसम्म कार्यालयको जिम्मेवारी । आमा, बुबा, श्रीमती, छोरा, साथीभाइ, इष्टमित्र, समाज सबैप्रति आफ्नो भूमिका तथा जिम्मेवारीमा कुनै कमी छैन । उनको सक्रियता, मुहारमा झल्किएको उत्साह हेर्दा उनी मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरिएका व्यक्ति हुन्...
२८ हप्ताको सुरक्षित गर्भपतनको व्यवस्थाले १२ वर्षीय बालिकालाई राहत access_timeकात्तिक २५, २०७६
काठमाडौँ । बलात्कारका कारण १२ वर्षको कलिलो उमेरमै गर्भवती भएकी बालिका थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहबाट उपचारपछि डिस्चार्ज भएकी छिन् । अस्पतालले शुक्रबार उनको सुरक्षित गर्भपतन गरेको हो । दुई दिनको आरामपछि आइतबार अस्पतालले उनलाई डिस्चार्ज गरेको जनाएको छ । बालिका २१ ...
डा. केसीको अनशन : अरु नै स्वरुपमा राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्न सुझाव access_timeकात्तिक २०, २०७६
प्रा. डा. गोविन्द केसीले कात्तिक १८ गते सोमबारबाट १७ औँ अनशन सुरु गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै बारम्बार सत्याग्रहमा सामेल हुँदै आएका डा. केसीको समग्रमा यो १७ औँ अनशन हो । यद्यपि सरकारी सेवाबाट अवकास पाएपछि उनको यो पहिलो अनशन हो । उनी हालै ...
स्वास्थ्य बीमामा सहभागिता : कुनै पनि प्रदेशले २० प्रतिशत कटाउन सकेनन्, प्रदेश २ एक प्रतिशतमा सीमित access_timeकात्तिक १९, २०७६
काठमाडौँ । वि.सं. २०७२ चैत २५ गतेदेखि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम लागु गरेको थियो । कैलालीबाट सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिलेसम्म ४९ जिल्लामा सुरु भइसकेको छ । तर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नागरिकको सहभागीता भने आशातित देखिएको छैन । चालु वर्षसम्...
तिहारको खानपानमा यी रोगीले दिनुपर्छ विशेष ध्यान access_timeकात्तिक १२, २०७६
तिहार अर्थात् रमाइलोको पर्व । मीठो मीठो मिठाई, सेलरोटी, विन्नि किसिमका ड्राइफ्रुटहरु खानेखुवाउने अवसरको पनि पर्व । विशेषगरी भाई टिकाको दिन दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई विभिन्न थरीका परिकार बनाएर खुवाउने र खाने चलन पनि छ । यो समयमा त मिठाईको मेलानै लाग्ने गर्छ । चा...
अल्छी मान्छेमा हृदयघात (हर्टअट्याक) हुने सम्भावना बढी access_timeकात्तिक ९, २०७६
काठमाडौँ । मुटुमा देखिने समस्या हृदयघात एक प्रमुख समस्यानै मानिन्छ । यो समस्याबाट पनि नेपालमा दैनिकजसो नै नागरिकले ज्यान गुमाउँदै आइरहेका छन् । हृदयघातबाट ज्यान गुमाउनेमा नेपालमा ठूला नाम चलेको व्यक्तिदेखि सामान्य नागरिकसम्म पनि छन् । नागरिकले नै धेरै ध्यान दिने ...
स्वास्थ्यमा १५ हजार गुनासो, बल्ल ९ सय सम्बोधन access_timeकात्तिक ८, २०७६
काठमाडौं । अन्य प्रशासन क्षेत्र कर्मचारी समायोजनपछि आफ्नो कामको रफ्तारमा लागिसकेको बेलामा यता स्वास्थ्य क्षेत्रको समायोजन भने अझै टुङ्गिन नसक्दा देशभरको स्वास्थ्य सेवा अस्तव्यस्त बनेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनको लिष्ट सार्वजनिक गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी र अन्...
एयर एम्बुलेन्स सेवा : ९ महिनामा ४० जनाले पाए सेवा access_timeकात्तिक ७, २०७६
काठमाडौँ । सरकारले उपचार नपाएका सुत्केरी आमा र शिशुको उपचारका लागि ०७५ पुस ६ गतेबाट ‘एयर एम्बुलेन्स सेवा’ सुरु गर्यो । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको ‘एयर एम्बुलेन्स सेवा’ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको...
साउनदेखि सबै स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स सेवा अनिवार्य, एम्बुलेन्स ट्रयाकिङ सेवा भने अलपत्र access_timeकात्तिक ५, २०७६
कात्तिक । नेपालमा समयमा एम्बुलेन्स नपाउँदा धेरैले उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउँदै आइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ सुरु भएसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स सेवालाई अनिवार्य बनाएको छ । सरकारी प्रावधानलाई मान्ने हो भने ७५३ वटै स्थानीय तह...
हाडजोर्नीको समस्यालाई सामान्य नसोच्नुस्, अपाङ्ग भइएला access_timeकात्तिक २, २०७६
काठमाडौँ । हाडजोर्नी बिना शरीरको बनावट असम्भव हुन्छ । तर कतिपयले हाडजोर्नीलाई खासै महत्व दिएका हुँदैनन् र समस्या आएपछि पनि धेरै बिरामी समयमा अस्पताल पुग्दैनन् । अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पताल पुग्दा समस्या थपिइरहेको हुन्छ । समयमा अस्पताल नपुग्दा अपाङ्गता हुने समस्या समेत ह...
दरबन्दी नै नभएको क्षेत्रमा समायोजन भएका स्वास्थ्य कर्मचारीलाई हाजिरी गराउन मन्त्रालयको परिपत्र access_timeकात्तिक १, २०७६
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दरबन्दीनै नभएको स्थानमा समायोजनमा भएका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई हाजिरी गराउन सबै स्थानित तहलाई परिपत्र गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई दरबन्दीभन्दा बढी र दरबन्दी नै नभएका स्थानमा समायोजन भएर गएक...
थोरै तर पटक पटक खानुस्, दसैँमा यस्ता बिरामीले विशेष ख्याल गर्नुस् access_timeअसोज २२, २०७६
काठमाडौँ । दसैँ खानपिनको मुख्य पर्व नै हो । दसैँको समयमा बढी मात्रामा मासुको प्रयोग गरिन्छ । मासु स्वास्थ्यका लागि आवश्यक भए पनि धेरै खानु फाइदाजनक मानिदैन । दसैँको समयमा रोगको पनि ख्यालै नगरी मासु, मादक पदार्थको बढी नै प्रयोग गरिन्छ । कम खानु स्वास्थ्य...
फ्रिजका खानेकुरा कम प्रयोग गरौँ access_timeअसोज २२, २०७६
काठमाडौँ । दसैँ खानपानको मुख्य पर्व हो । लामो समयसम्म बिदा हुने हुँदा पनि दसैँ सबैका लागि विशेष हुन्छ । यो बिदाको समयमा मनोरञ्जन खानपानलाई धेरै महत्त्वका साथ हेरिन्छ । दसैँमा बढी मात्रामा मासुको प्रयोग गरिन्छ । मासु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हो तर बोसोजन्य मासुले स्वा...
‘अरू दसैँ मनाउन व्यस्त हुन्थे, म भने अस्पतालमा अपरेसनमा व्यस्त’ access_timeअसोज २१, २०७६
काठमाडौँ । डाक्टर सन्तोष पौडेल । अध्ययनसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा दिन थालेको १७ वर्ष भयो । हाल उनी हाडजोर्नी विशेषज्ञका रूपमा वीरअन्तर्गतको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत छन् । विशेषज्ञ चिकित्सक बनिसक्दासम्म पनि उनलाई दसैँ होस् या अन्य चाडपर्व घरमा बसेर मज्जाले...